नेपालमा संक्रमितको नयाँ रेकर्ड, आज यती धेरै संक्रमित थपिए ! हेर्नुहोस्
September 11, 2020 974
नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा थप १ हजार ४५४ जनामा कोरोना भाइरसको संक्र’मण पुष्टि भएको छ । यो सँगै कोरोना संक्र’मितको संख्या ५१ हजार ९१९ पुगेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसं’ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले शुक्रबार निय’मित लाइभ अपडेटमा उक्त जानकारी दिएका हुन् ।
मन्त्रा’लयका अनुसार काठमाडौं उपत्यका’मा पछिल्लो २४ घण्टामा थप ६९६ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
यसैगरी पछि’ल्लो २४ घण्टामा थप ९७२ जना कोरोना संक्र’मणमुक्त भएका छन् । योसँगै नेपालमा को’रोना सं’क्रमण भएर निको हुनेको संख्या हालसम्म ३६ हजार ६७२पुगेको छ ।
उनीहरू देश’का विभिन्न स्थानका अस्प’तालबाट संक्र’मणमुक्त भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको हो। यसअघि विहीबार तथ्यांक’अनुसार नेपालमा कोरोना संक्रम’णमुक्त हुने’को संख्या ३५ हजार ७०० थियो ।
मन्त्रालयका अनुसार शुक्रबा’रसम्म कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या ३२२ पुगेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रा’लयका अनुसार काठमाडौंमा ६२०, ललितपुरमा ३८ र भक्त’पुरमा ३८ जना गरी जम्मा ६९६ जना संक्रमित थपि’एका छन् ।
Prevमलाई आफ्नै सरले यस्तो बनाए…
Nextकोरोनाबाट नेपालमा आज ५ जनाको मृ’त्यु , यी-यी जिल्लाका हुन् मृतक….
सुष्मा कार्की’लाई जवाफ दिदैँ पुजा र आकाश लाइभमा, फ्यानलाई यति सम्म भने (हेर्नुहोस् भिडियो)
आज मंसिर ३ गते बुधबारको राशिफल हेरेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्